Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home STARS EUROPEAN Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny fanakanana ny baolina kitra izay fantatry ny anarany manokana; 'The Octopus'. Ny Thibaut Courtois Childhood Story plus Ny zava-misy marina momba ny zavakanto dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana amin'ny fiainana ary ny maro momba ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony amin'ny baolina kitra, saingy vitsy no mihevitra ny Bio Bio Thibaut Courtois izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Voalohandohan'ny fiainana
Thibaut Nicolas Marc Courtois dia teraka tamin'ny andro 11 tamin'ny 1992 tao Bree, Belzika. Teraka tamin'ny reniny izy, Gitte Courtois ary rain'i Thierry Courtois.
Tsy teraka ho mpilalao baolina i Courtios; Teraka ho mpilalao volley ball izy. Tamin'izaho mbola kely dia malemy izy ary indraindray tsy nieritreritra. Niaiky izy indray mandeha fa mieritreritra "be loatra" izy nandritra ny horonan-taratasy mandeha amin'ny gymnastique, ary tonga dia nanala tanteraka ny mpampianatra azy. "Tsy mbola mahery fo amin'ny gymnastics aho", hoy izy.
Ireo lozam-pifamoivoizana dia foto-kevitra iombonana nandritra ny fahazazany. Indray maman-dreniny, Gitte Lambrechts, izay mpitsabo saina, dia tsy maintsy nitondra azy tany amin'ny hopitaly: taolana tapaka, ravin-kanafom-pandehanana, rindrina ao anaty kilaometatra, ratra mahafaty eo amin'ny lohany rehefa mifamely amin'ny seza iray, sy ny sisa. Tsy nanamafy ny fiainana.
Rehefa teraka tamin'ny 11 May 1992 tao amin'ny hopitaly Maas en Kempen tao Bree, Belzika, ny ray aman-dreniny, Lambrechts ary Thierry Courtois, mpilalao volleyball semi-professional, dia efa nanapa-kevitra fa hamela ny zanany lahy hanapa-kevitra ny amin'ny fanatanjahan-tena hotontosainy. Nentin'izy ireo tamin'ny lalao baolina kitra izy, mazava ho azy, saingy tsy ela talohan'ny naha tanora azy dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny i Courtois fa te hifantoka amin'ny baolina kitra izy. Dimy izy.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Karohy amin'ny famintinana
Any Belzika, tsy afaka miditra amin'ny klioba ianao raha hilalao baolina voalamina raha tsy efa enin-taona ianao, fa rehefa avy nitomany sy nikiakiaka i Thibaut Courtois, dia navelan'ny filoham-paritra, Bilzen, ny tanora hanatevin-daharana ny fikambanany.
Courtois dia nanomboka ny asany amin'ny bilzen VV eo an-toerana, tsy toy ny mpiambina, fa toy ny havia havia. Na dia volana 18 aza ny zandriny noho ny mpiara-mianatra taminy, dia nanatanjaka sy mahery ny Courtois. "Zazakely kely matanjaka izy," hoy ny mpanazatra voalohany, Bart Theunissen. "Olona iray mangina, saingy tamin'izany fotoana izany dia olona tsy misy dikany. Tsy nanana fitaovam-piadiana tena izy izahay, raha nanapaka ny mpilalao anay izahay, izay mahazatra amin'io vanim-potoana io. Saingy efa hitanao fa manana fikasana tsara izy. "
Fotoana fohy talohan'ny nanombohan'ny mpanazatra ny Racing Genk, ekipa voalohany eo an-toerana, dia nanomboka nanamarika ny talentany. Tamin'ny valo, nanasa azy ho any amin'ny iray amin'ireo fotoam-pitsapany izy ireo ary tsy ela taorian'izay dia niaraka tamin'izy ireo tamin'ny taona 1999. Teo izy no niova fo ho mpiandry fitia.
Courtois dia nahazo diplaoman'ny Genk tanora, ary 18 taona, dia nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fandresen'ny Belgian Pro League ekipa. Tamin'ny volana jolay 2011 dia nanatevin-daharana an'i Chelsea izy ho an'ny £ 8 tapitrisa ary nindramina avy hatrany tamin'i Atlético Madrid. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Relationship Life
Eny, romoranto izy, saingy tsy miorina tsara amin'ny fifandraisany. Manolotra anao izahay, ny antsipiriany momba ny fifandraisan'i Thibaut Courtois.
Thibaut dia fanta-daza tamin'ny fitenenana Espanaard Marta Dominguez izay sary etsy ambany sy ambany. Niara-nivory nandritra ny taona maromaro izy ireo rehefa nindram-bola tany Atletico Madrid. Samy niara-nifaly izy ireo.
Tamin'ny 26 May 2015, ilay sipany vavy Marta Domínguez dia niteraka an'i Adriana zanany vavy.
Tamin'ny volana 2017 dia nanamafy fa ny Courtois sy Domínguez dia namarana ny fifandraisan'izy ireo. Tamin'io taona io koa, i Thibaut dia nanana zanakalahy, Nicolas, niaraka tamin'i Domínguez, teraka tao 2017. Be bevohoka izy rehefa nanapa-kevitra ny hanaraka ny lalany. Thibaut no hany mpitazona fanta-daza izay nisarahan'ny vehivavy vady.
Taorian'ny fisarahan-kevitra tamin'i Marta, hoy i Thibaut ... 'Tsy miaraka amiko intsony i Marta sy ny sipako. Hatramin'ny fiandohan'ny volana Septambra, nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fifandraisanay izahay, amin'ny fepetra amam-panahy. '
Marta dia voampanga ho nanao fanambarana tamin'ny modely Emily Vanhoutte, Miss Belzika, Emily Vanhoutte. Nanambara i Ms Vanhoutte fa taitra izy avy eo vao nahita fa efa nandray ny Courtois. Hoy izy: 'Tsy hanao na inona na inona aho hanombohana raharaha amin'ny lehilahy iray izay maneso ny sipany. Tsy fantatro fa nanana sipa izy ary nitarika fiainana roa. '
Taorian'ny fisarahana tamin'ny sipany vavy bevohoka dia tsy naharitra ela talohan'ny nahitana an'i Thibaut Courtois nankafy fialantsasatra tamin'ny vehivavy mistery iray. Samy nifankatia ny orinasa tsirairay satria nifanerasera taminy nandritra ny fiaramanidina jet ski.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fifandraisana fifandraisana winy Kevin de Bruyne
Kevin dia efa tia an'i Caroline Lijnen. Natao nandritra ny taona 3 izy ireo talohan'ny nanesorana an'i Thibaut Courtois ny fifandraisana izay noraisina ho sakaizam-piarahamonina azo itokisana Kevin. Thibaut Courtois, natory niaraka tamin'ny sipany, dia nanitrika ny fiandohan'ny hatezerana. Kevin de Bruyneilay sakaizan'i Caroline Lijnen, dia nanambara fa nanohy nametaveta azy niaraka tamin'i Thibaut Courtois namany akaiky izy taorian'ny nifaneraseran'i Kevin taminy tamin'ny namany akaiky indrindra.
Niaiky ihany koa izy fa ny Courtois no nanome azy ny fitsaboana tsara indrindra hatramin'izay, ny karazana tsy azony avy amin'ny Bruyne.
Amin'ny teniny ho an'i Kevin ... "Nanome ahy nandritra ny alina i Thibaut Courtois izay tsy azonao tamin'ny taona 3"
Nolazain'i Kevin fa nandoavina ny laharam-boninahitra voalohany nataony ary nandoa vola izy. Nilaza ihany koa izy fa fantatry ny ray aman-drenin'i Kevin ny trosany, saingy tsy afaka nilaza na inona na inona izy. Izy ireo kosa nanohana ny zanany angamba satria kintana izy.
Araka ny voalazan'i Lijnen tamin'ny teniny tamin'ny gazetiboky Story Magazine, dia nilaza izy fa ..."Tsy niteny aho nandritra ny volana maromaro satria tsy afaka nilaza na inona na inona aho, araka ny nolazain'ny ray aman-drenin'i Kevin fa handray andraikitra ara-dalàna raha nomeko ny tantarako. Nirehareha i Kevin nilaza tamiko fa nanana fifandraisana tamin'ny namako taloha izy. Nomeko azy ny safidy: izy na izaho. Vonona ny hanome azy làlana hafa aho, saingy ny fifandraisanay dia tsy mitovy mihitsy avy eo. Niady saina aho. Nahatsapa aho fa voafandrika. Nanapa-kevitra ny tsy hangina intsony aho. Izany no nahatonga ahy nankany Thibaut namany akaiky indrindra mba hitady fialofana sy toro-hevitra. Nampionona ahy i Thibaut ary nanararaotra naneho ny fihetseham-pony izy fa niafina tamiko. Nanolotra ahy izay tsy azoko nandritra ny telo taona nifandraisan'i Kevin izy. Nataony hoatran'ny vehivavy tena izy aho. Miaraka amin'i Thibaut, afaka miresaka momba ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra aho. Nanomana sakafo matsiro aza izy. Tsy nanao izany mihitsy i Kevin. "
Mandritra izany, i Courtois sy i Bruyne dia tsy nanamafy ny fahasamihafany hatramin'ny nitrangan'izany. Izany no antony nandavan'i Kevin ny endriny Chelsea FC. Nalahelo i De Bruyne momba ny namany akaiky indrindra, Thibaut dia nanao taminy. Afaka nijanona tao izy Chelsea mba hiady ho an'ny toerany saingy tsy afaka mamela azy ny fihetseham-pony. Izany no antony nandaozany ny klioba ary nahoana izy no niverina ho mpifaninana.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Manomboka aminareo dia manolotra sarin'i Thibaut Courtois izahay. Thibaut, araka ny hita etsy ambany, dia mitovy endrika amin'ny rainy, Thierry Courtois izay mpilalao volleyball semi-profesional efa misotro ronono.
rENY: Ny Zanak'ondry fantatra amin'ny anarana hoe Gitte Courtois no renin'ny mpiambina Torio, Thibaut. Tahaka ny vadiny Thierry, Gitte koa dia mpilalao volley ballone Belza.
Volleyball no nitondra ny ray aman-drenin'i Thibaut Courtois.
anabaviny; Thibaut dia manana endrika tsara tarehy-mitovy ny anabavy mandeha amin'ny anarana Valérie Courtois. Valérie dia mpilalao volleyball matihanina, izay nilalao ho libero ho an'ny ekipany, Budowlani Łódź ary ho an'ny ekipa mpilalao baolina kitra ao Belzika.
Tao amin'ny 2013, izy no nantsoina hoe Best Libero an'ny Championship Eoropeana. Valérie dia roa taona noho ny anadahiny. Ity ambany ity ny Valérie Courtois (Tiger Yellow teo amin'ny anarana).
rahalahiny avy; Gaetan Courtois no rahalahin'ny Thibaut Courtois.
Izy no mpanohana lehibe ny zokiny lahy.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Gif Facts
Eva Carneiro manatrika azy, tsy toy ny mpitsabo ara-panatanjahantena.
Eva dia manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana any Gibraltar teraka tany Gibraltar izay fantatra amin'ny maha-dokotera voalohany mpitsabo azy Chelsea FC, izay niarahany tamin'ny 2009.
Jose Mourinho bahoaka taloha Chelsea ny dokotera ekipa Eva Carneiro rehefa avy nihazakazaka teo amin'ny toerana nitazonana ny loza iray tao Eden Hazard. Izany no nanao ny teo aloha Chelsea dokotera, Eva Carneiro naneho ny fialany tamin'ny fikambanana taorian'ny fipoahana avy tao Mourinho, 53, izay nolazainy fa nantsoiny hoe "Zanakavavin-drenirano" amin'ny teny portogey.
Thibaut dia tia ny fanamby rano.
Nahazo fangirifiriana i Thibaut.
Manaja an'i David de Gea i Thibaut.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -toetra
Thibaut Courtois dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Thibaut Courtois Tanjaka: Tena azo ampiharina sy azo itokisana ihany izy eo amin'ny sehatra matihanina.
Thibaut Courtois Fahalemena: Afaka ny ho mafy loha, manana toe-tsaina, tsy manam-pahaizana ary tsy mifandray tsara izy.
Inona no tian'i Thibaut Courtois: Fikarakarana zaridaina, fikarakarana, mozika ary am-pitiavana
Thibaut Courtois tsy tia azy: Fiovàna tampoka eo amin'ny fitondrantena, fitondran-tena sy tsy fahampian'ny vehivavy.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Resaka miaraka amin'i Simon Mignolet
Tamin'ny volana febroary 2014, nahatonga resa-be tao amin'ny ekipam-pirenena i Courtois, tamin'ny filazana Simon Mignolet, ny mpifaninana aminy ho an'ny kianja filalaovana baolina, "Tokony ho fantatrao ny fomba hananana fanetren-tena sy fanajana, ary tokony hahatsiaro izany izy."
Na dia teo aza ny resadresaka teo aloha, dia nilaza i Mignolet fa ny tanjony dia ny hiasa hatrany ary hiezaka hamerina ny toerana ao amin'ny ekipam-pirenena.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Thibauting
Notarihan'ny Courtois 'avy amin'ny tahiry manokana tamin'ny volana june 2013, mpankafy Kolombiana iray namorona fampahalalam-baovao sosialy vaovao nampahalaza azy 'Thibauting' mba hanomezam-boninahitra an'ilay mpiambina gitara belza.
Tamin'ny volana Nôvambra 2013, nampidirina tao anaty lisitry ny lisitry ny teny holandey holandey navoakan'i Van Dale ny teny hoe "Dale Dale" mba hamaritana ny teny fanatanjahantena vaovao / fanatanjahantena vaovao tsara indrindra any Belzika ary nifarana tamin'ny faharoa. Ity ambany ity ny sarin'ny mpankafy, 'Thibauting' to glory.
Ny teny fototra dia mifototra sy manambara ny fomba mitovy amin'izany "Tebowing", ary mitovy amin'ny manerantany ihany koa 'Planking' meme izay nalaza tamin'ny 2011.
Thibaut Courtois Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Nianjera izy ho an'i Antonio Conte Love Game
Manana fomba hanehoana fitiavana azy i Antonio Conte Chelsea mpilalao izay manohintohina ny kliobanon'i Londres ho an'ny fialàna ahitra maitso.
I Thibaut dia nandrahona ny handao an'i Real Madrid. Antonio Conte dia nanaparitaka ny zava-misy tamin'ny fanatanterahana lalao lalao miaraka aminy amin'ny fomba iray mba hahazoany ny fisaintsainany. Novonoin'i Thibaut izany. FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Thibaut Courtois momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Baolina kitra baolina kitra
Thomas Partey ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Jose Gimenez Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra
Thomas Meunier Tantara an-tsary momba ny tantaram-piainana malaza tsy fantatra
Mousa Dembele Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Jona 22, 2018
Cesc Fabregas tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Febroary 19, 2018